मध्यवर्ती राज्य - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > WKG लाई विश्वास गर्नुहोस् > मध्यवर्ती राज्य
मध्यवर्ती राज्य त्यो राज्य हो जसमा मृत शरीर को पुनरुत्थान सम्म हुन्छ। सान्दर्भिक शास्त्रहरूको व्याख्यामा निर्भर गर्दै, इस मध्यवर्ती राज्यको प्रकृतिको बारेमा ईसाईहरूको फरक विचारहरू छन्। केही खण्डहरूले सुझाव दिन्छ कि मृतकहरूले यो अवस्था सचेत रूपमा अनुभव गर्छन्, अरूले तिनीहरूको चेतना निभाएको छ। भगवानको विश्वव्यापी चर्च विश्वास गर्दछ कि दुबै विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। (यशैया 14,9:10-32,21; इजकिएल 16,19:31; लूका 23,43: 2-5,1; 8:1,21; 24 कोरिन्थी 6,9: 11-6,6; फिलिप्पी 88,11: 13-115,17; प्रकाश 3,19: 21-9,5.10; भजन 38,18, 11,11 ; 14: 1-4,13; 14; उपदेशक:;:,; यशैया; यूहन्ना:; थेसलोनिकी:)।
"मध्यवर्ती राज्य" को बारेमा के हुन्छ?
विगतमा, हामी सामान्यतया तथाकथित "मध्यवर्ती राज्य" मा कट्टरपन्थी अडान लिन्छौं, कि हो, एक व्यक्ति बेहोश छ वा मृत्यु र पुनरुत्थानको बीचमा सचेत। तर हामीलाई थाहा छैन। इसाई इतिहासभरि धेरैले सोचे कि मृत्यु पछि मानिस सजिलैसँग परमेश्वरसँग वा सचेतपूर्वक सजाय दिइन्छ। अल्पसंख्यकको राय "आत्मा निन्द्रा" को रूपमा परिचित छ।
जब हामी धर्मशास्त्रहरू जाँच गर्छौं, हामी देख्छौं कि नयाँ नियमले मध्यवर्ती राज्यको आश्वासन प्रदान गर्ने प्रस्ताव राख्दैन। त्यहाँ केही पदहरू छन् जुन मानिसहरू मृत्यु पछि बेहोस छन् भनेर संकेत गर्दछ, साथै केही पदहरू जुन मानिस मृत्यु पछि सचेत छन् भनेर संकेत गर्दछ।
हामी धेरै जसो पदहरूसँग परिचित छौं जसले मृत्युलाई "निद्रा" को रूपमा उपदेशकको पुस्तक र भजनको रूपमा वर्णन गर्दछ। यी पदहरू एक घटनागत दृष्टिकोणबाट लेखिएका छन्। अर्को शब्दहरु मा, जब तपाइँ एक मृत शरीरको भौतिक घटना हेर्नुहुन्छ, यस्तो लाग्दछ कि शरीर सुतिरहेको छ। त्यस्ता भागहरूमा निद्रा भनेको शरीरको उपस्थितिसँग सम्बन्धित मृत्युको तस्वीर हो। जे होस्, जब हामी मत्ती २:27,52::11,11२, यूहन्ना ११:११ र प्रेरित १ 13,36: जस्ता पदहरू पढ्छौं, यस्तो देखिन्छ कि मृत्युलाई शाब्दिक रूपमा "निद्रा" सँगसँगै मिल्दछ - जबकि लेखकहरू यो कुरा जान्दथे कि त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता थियो। मृत्यु र त्यहाँ सुत्नुहोस्।
यद्यपि हामीले मृत्यु पछाडिको सचेतनालाई जनाउने पदहरूमा पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्दछ। २ कोरिन्थी:: १-१० मा, पावलले पद2मा "ना naked्गो" र पद in मा "प्रभुको घरमा बस्नु" भन्ने शब्दहरू बीचको अवस्थालाई जनाउँदछन्। फिलिप्पी १: २१-२5,1 मा, पावलले भने कि मर्नु भनेको "लाभ" हो किनकि इसाईहरू "ख्रीष्टसँगै बस्न" संसार छोड्दछन्। यो बेहोश जस्तो लाग्दैन। यसलाई लूका २२::10 मा पनि देख्न सकिन्छ, जहाँ येशूले क्रूसमा डाँकूलाई भन्नुभयो: "आज तिमी मसँग स्वर्गमा हुनेछौ।" ग्रीक स्पष्ट र सही अनुवाद गरिएको छ।
अन्ततः मध्यवर्ती राज्यको शिक्षा भनेको यस्तो कुरा हो जुन परमेश्वरले हामीलाई बाइबलमा सही र छोटकरीमा वर्णन गर्न नचाहनु भएको थियो। हुनसक्छ यो बुझ्ने क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो, यसलाई व्याख्या गर्न सकिएला पनि। यो शिक्षा निश्चय पनि त्यस्तो प्रश्न होईन कि कुन इसाईहरूले तर्क गर्नुपर्दछ र विभाजित हुनुपर्दछ। ईभान्जिकल डिक्शनरी अफ थिओलजी व्याख्या गरेझैं: "मध्यवर्ती अवस्थाको बारेमा अनुमानले क्रस वा नयाँ सृष्टिको आशाबाट आउने निश्चिततालाई कहिले पनि हल्का बनाउँदैन।"
यदि उहाँ मरे पछि परमेश्वरसँग पूर्ण चेतनामा हुनुहुन्छ भने र कसले परमेश्वरलाई गुनासो गर्न चाहन्छ: "येशू नफर्कुन्जेल म सुत्नु पर्छ - म किन सचेत छु?" र निस्सन्देह, यदि हामी बेहोश छौं भने हामी गुनासो गर्न सक्षम हुनेछैनौं। जे भए पनि, हामी मृत्यु पछि अर्को चेतना क्षणमा परमेश्वर संग हुनेछौं।